August 14, 2019 - ThutaSone
ေဩာ် …အတိတ်​တဘောင် ဩဘာထွန်းတဲ့ ဇဗ္ဗူဒီပါ လကျ်ာတောင်ကျွန်းတဲ့….
August 14, 2019 ThutaSone 0
ေဩာ် …အတိတ်​တဘောင် ဩဘာထွန်းတဲ့ ဇဗ္ဗူဒီပါ လကျ်ာတောင်ကျွန်းတဲ့…. (ဗန်းမော်ရွှေကူနားကဒုတိယမြစ်ကျင်းမှာ ကြက်တူရွေး ရေသောက်ပီဆိုရင် တစ်ပြည်လုံးရေကြီးတယ်တဲ့ …ကြက်တူရွေးရေငုတ်နေပြီ အထူးသတိရှိကြပါတော့ …) လွန်ခဲ့တဲ့ လက တစ်လလုံး အဲ့ပုံတွေပဲ facebook မှာတွေ့ နေရ တာ သတိမထားခဲ့ဘူး..။ ထင်လဲ မထင်ခဲ့ဘူး..။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ […]
စတုတ္ထရုံးချိန်းက စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ သက္ကမိုးညို
စတုတ္ထရုံးချိန်းက စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ သက္ကမိုးညို စတုတ္တရုံးချိန်း စတုတ္တရုံးချိန်းမှာ ကလေး ဖခင်နဲ့ အဘွားကို စစ်ဆေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပေးမယ့် ကလေးဖခင်တယောက်နဲ့ပဲ အချိန်တွေ ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ရှည်လျားတဲ့ စစ်မေးခြင်း၊ အဖြစ်အပျက်တွေထဲက သိသင့်တာကိုပဲ ထုတ်ရေးပါ့မယ်။ ၁- အရင်တုန်းက မီးမီးလေးက အောင်ကြီးကို မီးမီးဖင်ဖုကို […]
သားသမီးများနှင့် ဘဝဆက်ပဌာန်းဆက်ပါရမီရှင်တို့ကို တိုက်တွန်းထားသော သစ်တံခါးဆရာတော်ရဲ့ နှိုးဆော်စာ သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ သစ်တံခါးဆရာတော်၏ သားသမီးများနှင့် ဘဝဆက်ပဌာန်းဆက်ပါရမီရှင် သူတော်ကောင်းတို့ ၁၅.၈.၂၀၁၉ ကြာသာပတေးနေ့ 👉 ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ မေတ္တာ အခါတော်နေ့👈 ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး တကမ္ဘာလုံး အေးချမ်း၍ စစ်ဘေးရန်တွေ ငလျှင်ဘေး ရေဘေး လေဘေး မီးဘေး […]
ခေါင်းကိုက်တိုင်းဆရာဝန်နဲ့ ပြသခြင်းမပြုဘဲ ဆေးဝယ်သောက်လေ့ရှိသူ၊ ဆေးရုံရောက်ပြီး မကြာမီမှာသေဆုံး အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ၊ သူမ ခေါင်းကိုက်တိုင်း ကိုယ့်ဖာသာ ဆေးဝယ်သောက်လေ့ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ သူမဟာ တစ်နှစ်ကြာ မိမိဖာသာ ဆေးဝယ်သောက်ရင်း၊ နောက်ဆုံးတော့ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားခဲ့ရပြီး၊ အသက်သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဆို်ပါ အမျိုးသမီးဟာ […]
ပေါင်းစားခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့် ရေတိမ်နစ်ရတော့မယ့် မုံရွာတက္ကသိုလ် သုတေသနအဆောက်အဦး အရည်အသွေး မမီတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေက တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ မုံရွာ တက္ကသိုလ် သုတေသန အဆောက်အဦးကြီးဟာ ဆောက်လုပ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ တတ်သိ ပညာရှင်တွေ ပြောကြားချက်အရတော့ အောက်ခံ မြေသား ကျစ်လစ်ခိုင်မာမှုရှိအောင် မပြုလုပ်ဘဲ […]
အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ကတော့ အောင်ကြီးပေါ်မှာ ဟန်ထရွက်ပါစင့် ယုံတယ်လို့ ဒါ်စုဒါလီအောင်က ပြောသွားသည် နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၄ ။ ။ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအတွက် ကျူးလွန်သူများမှာ ကိုကိုနှင့်ညီညီ ဖြစ်သည်ဟု ကလေးငယ်က ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်စုဒါလီအောင်က ပြောသည်။ လိင်အကြမ်းဖက်ခံရသော သုံးနှစ်အရွယ် သမီးငယ် […]
ဖခင်ဖြစ်သူကဗစ်တိုးရီးယားလေးကို ဓာတ်ပုံ (၅) ပုံပြပြီး မေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုကို ရုံးတော်သို့ တင်သွင်း
ဖခင်ဖြစ်သူကဗစ်တိုးရီးယားလေးကို ဓာတ်ပုံ (၅) ပုံပြပြီး မေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုကို ရုံးတော်သို့ တင်သွင်း ဒီကနေ့ (၁၄.၈.၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ နေပြည်တော် Wisdom Hill မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကို (၄) ကြိမ်မြောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့စစ်ဆေးမှုမှာ ဗစ်တိုးရီးလေး ဖခင်နဲ့ အဘွားတို့ကို စစ်ဆေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ယခုအချိန်ထိ […]
သိန်း ၂၀ ကျော်မီတာခကျတဲ့ ညောင်ဦး ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ အဖြစ်မှန်
သိန်း ၂၀ ကျော်မီတာခကျတဲ့ ညောင်ဦး ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ အဖြစ်မှန် ဘုန်းကြီးကျောင်း စာသင်တိုက် လျှပ်စစ်မီတာခ သိန်းရာကျော် ကျသင့်သည်ကို အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ထေ့သော ကလိသော ပြောနေကြတော့ ကြားထဲက ကပ္ပိယ က ဝင်ဖာချင်သေး ။ ဝါဆို သံဃာ ၁၃၀၀ ကျော် […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေးက သမီးကို လုပ်တဲ့ ဒီကိုကို ကို သမီးသေနတ်နဲ့တောင်ပစ်ချင်တယ်လို့ ပြောကြောင်း ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ ဖခင်ထွက်ဆို
ဗစ်တိုးရီးယားလေးက သမီးကို လုပ်တဲ့ ဒီကိုကို ကို သမီးသေနတ်နဲ့တောင်ပစ်ချင်တယ်လို့ ပြောကြောင်း ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ ဖခင်ထွက်ဆို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရတဲ့ အသက် ၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ သြဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့ လေးကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းမှာတော့ တရားလို ဖခင်ဖြစ်သူက ကလေးငယ်ကျောင်းရဲ့ စီစီတီဗီမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး […]
ရေဘေးအတွက် ဖြိုးမြတ်အောင် အလှူခံတာ သိန်း (၁၆၀) နီးပါး ရရှိ
ရေဘေးအတွက် ဖြိုးမြတ်အောင် အလှူခံတာ သိန်း (၁၆၀) နီးပါး ရရှိ Myanmar Idol Season (3) ပြိုင်​ပွဲ ကြီးရဲ့ Winner ဆုရှင်​ ဖြိုးမြတ်​​အောင်​က​တော့ ရိုးရိုး​အေး​အေး​နေထိုင်​တတ်​သူတစ်​ဦးမို့ ပရိသတ်​​တွေက အချစ်​ပို​နေကြရတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ဖြိုးမြတ်​​အောင်​က မွန်​ပြည်​နယ်​ ​ရေ​ဘေး​သင်​့​ဒေသသို့ သွား​ရောက်​လှူဒါန်​းဖို့အတွက်​ […]